2018 Jeep Wrangler JL Led Laydhka, Jeep JL Led Laydhka - Morsunled
9 inch Jeep Wrangler JL Nalalka hore - Naqshad gaar ah oo ku habboon Jeep Wrangler JL 2018 2019, bedelka saxda ah ee Jeep JL nalka hore ee asalka ah, biil looma baahna.
Tan iyo markii ay Jeep Wrangler JL 2018-up waxay isticmaaleysaa nalka hore ee 9 inch, waxaan qaabeynay mid ugub ah laydhka hore ee loogu talagalay Jeep Wrangler JL 2018+. Qaabkan MS-GX9 waa 9 inch oo nalka hore ee korantada, oo ka duwan noocyada kale ee 7 inch hogaamiya, waa lagu rakibi karaa Jeep Wrangler JL 2018 + iyada oo aan qarka la saarin, ciyaar fiican Jeep loogu talagalay JL 2018 +. Waxay ku timaaddaa 100w 6500lm dogob sare, 30w 3000lm dogob hoose oo leh 22w DRL, heerkul midab cad oo dabiici ah, DOT SAE oo la ansixiyay, oo badqaba wadada. In kabadan 50000 saacadood oo cimri dherer ah oo leh 12 bilood oo dammaanad ah, iibinta kulul ayaa keentay nalka hore ee baabuurta Jeep Wrangler JL 2018 2019. Waxaan nahay Jeep Wrangler hoggaamiyey soo saaraha laydhka hore ee guriga Shiinaha, waxaan ka qabannaa ganacsi caalami ah, ku soo dhawow baaritaanka.
Hoos waxaa ku qoran vidoe of Morsun 2018+ Jeep Wrangler jl ayaa hogaaminaya casharka rakibida nalalka iyo dib u eegista.
Faahfaahinta 9 inji Jeep JL Led Lights
Nalalka Halo ee 2018 Jeep Wrangler JL
Astaamaha 9 inch Jeep Wrangler JL LED nalka hore
9 INCH JL HEADLIGHTS - Naqshad gaar ah oo ku habboon Jeep JL (Maaha JK) 2018 2019, beddel ku habboon Jeep JL nalka hore ee asalka ah.